Distrikan’i Brickaville : Ho velomina ny orinasa mpamokatra siramamy
Nandritra ny fitsidihany ny faritra Atsinanana ny 21 Mey 2019 dia tao amin’ny distrikan’i Brickaville ny Filoha Andry Rajoelina nijery ifotony ny olana sedrain’ny orinasa Sirama teo aloha izay efa nivadika ho SASM (Société agricole et sucrière de Madagascar). Olana efa an-taonany maro. Nipetraka amin’ny maha raiamandreny azy ny filoha Andry Rajoelina ka nihaino ny olana na avy amin’ny andaniny na ny ankilany. Noho izany dia nomena hatramin’ny valo volana ny SASM hanodinana ny orinasa sy hamokarana siramamy ary atao ihany koa ny audit mikasika ny fananana sy ny fitantanana.
Hisy fotodrafitrasa maro
Hamelona indray ity orinasa malagasy ity ny tanjona hoy ny Filoham-pirenena ka tsy tombontsoan’olon-tokana no ho jerena fa ny tombontsoa iombonana. Tsy maintsy jerena ny marimaritra iraisana eo amin’ny mpiasa sy ny mpampiasa hoy ihany ny filoha Andry Rajoelina mba hiverina hamokatra indray ity orinasa ity ka hamerina ny hasin’ny vokatra vita malagasy. Nanolotra « groupes électrogène » ho an’ny mponin’i Brickaville ihany koa ny Filoham-pirenena ary nilaza ny tenany fa hisy fotodrafitrasa maro hapetraka eo amin’ity distrika ity. Isan’izany ny fametrahana « parc solaire » sy ny famerenana indray ny famokarana akondro sy ny ozina hanodina izany.